Sida loo rogo ama Guba iyo YouTube in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
YouTube waa video qaybsiga goobta ugu caansan. Booqashada YouTube, daawashada iyo wadaaga jecel videos aad saaxiibada caalamka oo dhan waa madadaalo weyn. Waxaad qaban karo dhowr ah oo la yaab leh YouTube videos, iyo waxa ay yihiin doorasho wanaagsan, inay gubi YouTube in DVD. Sidaas, waxaad daawan kartaa YouTube videos offline ciyaaryahanka DVD ama TV ama ku kaydi on disk adag. Bal aynu eegno sida ay u soo bixi YouTube videos gub, oo iyaga si DVD.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dejisan iyo YouTube gubi in DVD
Qeybta 2: Sidee si ay u gubaan aad hadda jira YouTube videos in DVD
Download iyo badalo YouTube videos in qaabab kala duwan gub, oo iyaga si DVD
Qalabka oo dhan-in-ka mid ah ay u soo bixi, diinta YouTube videos gub, oo iyaga si DVD la arrimo
Edit YouTube videos sida aad jeceshahay
Beddelaan iyo soo bixi videos degdeg ah iyo habka ugu fudud ee
Sida loo free download YouTube videos iyo gubi in DVD
Tallaabada 1. Ku rakib barnaamijkan on your computer
Download barnaamijka marayo soo socda download link oo ku xidh aad PC ama Mac. Ka dib markii barnaamijka la geliyo, waxaa ku dari doonaa Download fur-in ay u daalacashada aad diyaar u tahay in la ogaado ee videos YouTube.
Tag YouTube si aad u hesho videos aad jeceshahay oo iyaga guji inuu u ciyaaro. Markaas ah Download button ka muuqan doontaa. Waxaa Cclick in video ah soo bixi. Ama haddii kale, waxaad nuqul ka kartaa url video iyo riix URL Add badhanka si ay u soo bixi videos ah.
Tallaabada 3. Guba YouTube videos in DVD
Tag folder aad soo xulay si loo badbaadiyo videos aad soo bixi. Markaas riix Gubashada tab barnaamijka riix Add Files badhanka si ay u dajiyaan videos ee barnaamijka. Dooro template iyo geliso DVD madow si aad u computer. Ugu dambeyntii guji Guba si ay u bilaabaan ku gubanayso.
Barnaamijka aad u baahan-Wondershare DVD Creator
Guba photos, videos iyo music inay DVD in sida ugu easist
Guba cayn kasta oo videos in DVD leh tayo sare leh
Videos Edit iyo sawiro la editor ka dhisay-in
Abuur la duubey music iyo saamaynta weyn
Sida loo isticmaalo Wondershare DVD Creator ay gubaan YouTube videos in DVD
Tallaabada 1. dejinta aad YouTube videos
Riix Import ama jiidi ah videos YouTube si toos ah u furmo suuqa barnaamijka. Waxaad ku eegaan karo videos uu furmo suuqa xaq iyo qabsato mugga video saamayn ugu fiican. Dhinaca bidix, si xor ah ku darto, tirtirto iyo abaabulo DVD horyaal sida aad jeceshahay.
Tallaabada 2. Edit videos iyo astaysto DVD bedeley (optional)
Dalagyada, isku shaandheyn, jar, ku dar watermarks, iwm waxaa laga heli karaa in this DVD Creator . Sidaas, waxaad edit karaa oo retouch aad videos hortiisa ka ololaya si loo hubiyo tayada video ah.
Haddii aad qabto wax badan YouTube videos lagu shido, waa lagu talinayaa in la sameeyo DVD menu ah ee aad YouTube DVD. Just guji tab Menu iyo ka soo xusho 50 + marto oo dheeraad ah u astaysto haddii loo baahdo.
Tallaabada 3. Start YouTube in DVD gubashadii
Hadda, geliso disk DVD sida D5 ama D9 (hubiyo in ay la jaan aad DVD ciyaaryahan guriga) ah, ka dibna dooran heerka TV aad: NSTC ama Pal. Ugu dambeyntii, ka dhacay "Guba" si loogu badalo YouTube in DVD.
Iyada oo xirfad YouTube in DVD gubi, aad ku raaxaysan kartaa YouTube videos on ciyaaryahan kasta DVD qoyskaaga iyo saaxiibadaa guriga. Hoos waxaa ku tutorial video ah:
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama Guba iyo YouTube in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)